မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: October 2008 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
Vital Voices' 2008 Global Leadership Awards - Laura
Posted by အာဇာနည် at 3:43 PM0comments
Asachild Charm Tong was separated from her family and forced to flee Burma to escape the brutal military dictatorship. At 17 she testified before the UN Commission on Human Rights. She isaco-founder of the Shan Women's Action Network.
A tireless defender of the brutalized women of Burma. Charm Tong describes how rape is used asaweapon of suppression to Think Peace's Shahdin Farsai.
Posted by အာဇာနည် at 3:34 PM0comments
နိုဗယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်များရဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးသို့ အမြင်။
Nobel Laureates Prof. Jody Williams, Dr. Shirin Ebadi, Rigoberta Menchu Tum and Betty Williams speak on the first-year anniversary of the Saffron Revolution in Burma.
Posted by အာဇာနည် at 3:22 PM0comments
Jane Birkins music video—an ode to Nobel Prize Prisoner and prisoner of conscience, Aung San Suu Kyi—isapowerful, alarming and heartfelt look at the humanitarian crisis in Burma and the woman who continues to defy the oppression that lies within. Lyrics by Jane Birkin. Music by Frank Eurly. Learn more at protectthehuman.org
Posted by yahutha at 1:15 PM0comments
Posted by yahutha at 1:07 PM0comments
Report of SG, UN General Assembly Sixty-third session.
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 10:30 PM0comments
ရမယ်. မိတ်အင် တရုပ် လုပ် ကလေးကစားစရာသေနတ်တွေ။ မယ်လမင်းနို့ မှုန့် နဲ့ကျွန်းတောကိုလဲစား တော်တော် သောက်သုံးကျတဲ့နအဖ...
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် စစ်ရေးလေ့လာသူ ဦးဌေးအောင်ကလည်း တရုတ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဇောင်းလီ၏ ခရီးစဉ်သည် နှစ် နိုင်ငံ စစ်တပ်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို ဦးတည်သည့် အသွင်လက္ခဏာပင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
Posted by အာဇာနည် at 10:09 PM0comments
ထွီ .. ပြည်သူတွေကို ကျ မျက်နှာလွှဲခဲပစ်ထားတယ်။ တရားဥပဒေဆိုတာ ဘာလဲ.ဘယ်မလဲ
ယမန်နေ့နံနက် ၈ နာရီခန့်က ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက်၊ ဇဋိလလမ်း၊ အမှတ် ၂၆၊ ၃ လွှာရှိ တိုက် ခန်း တခန်းတွင် အသက် ၅၀ ကျော်အရွယ် ဒေါ်ဌေးဌေး အမည်ရှိ အမျိုးသမီးကြီး တဦးတည်း ရှိနေစဉ် အိမ် ခန်းပြင်ရန် ခေါ်ထားသော အလုပ်သမား တဦးက ပစ္စည်းများကို ခြိမ်းခြောက် တောင်းခံရာ အမျိုးသမီးကြီးက အော်ဟစ် အကူအညီတောင်းသဖြင့် ငရုပ်ကျည်ပွေ့နှင့် ခေါင်းကိုထုပြီး စကေဘာဖြင့် လည်ပင်းကို ထိုး သတ်သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သည့် မျက်မြင်တဦးက ပြောပြသည်။
“ပစ္စည်းတွေတော့ ပါမသွားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုတလောမှာ ဒါမျိုးတွေ ခဏ ခဏ ကြားနေရတယ်။ ညဘက် တွေ တောင် ညနက်ခံ အပြင်မထွက်ရဲတော့ဘူး” ဟု ကျောက်မြောင်းသား တဦးက ပြောသည်။
တနင်္လာနေ့ည ကလည်း ရွှေဂုံတိုင်ရှိ ယုဇနတာဝါ၊ ၁၃ လွှာနှင့် မြေညီထပ်တို့တွင် ဓားပြမှု ၂ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ထိုနေ့ည ၇ နာရီခန့်က ယုဇနတာဝါ ၁၃ လွှာရှိ ရှမ်းတရုတ်လူမျိုးပိုင် နိုင်ငံခြားသို့ သစ်တင်ပို့နေသော မြန်မာ ဝုဒ်မာ့ခ် ကုမ္ပဏီ ကိုဝင်ရောက်လုယက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဓားပြများဝင်ရောက်ချိန်တွင် အမျိုးသမီးငယ် ၂ ဦးသာ ရှိနေပြီး ထို အမျိုး သမီးငယ်များကို ဓားဖြင့်ထောက်ကာ နိုင်ငံခြားငွေများကို လုယက် သွား ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရသည်။
“ငွေဘယ်လောက်ပါသွားလဲ ဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူး။ ရဲတွေကတော့ အဲဒီနားက အခန်းတွေကို လိုက်စစ် နေတာပဲ” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းထောက်တဦးက ပြောပြသည်။
၎င်းည ၁၀ နာရီခန့်တွင်လည်း ယုဇနတာဝါမြေညီထပ်ရှိ ကုမ္မာရီစတိုးကို ဝင်ရောက်လုယက်ရာ ပိုင်ရှင် အမျိုး သမီးကြီးထံမှ ရွှေလက်ကောက်တကွင်းသာ ရသွားပြီး မီးများ လင်းလာသောကြောင့် ကျူးကျော်သူများ ထွက် ပြေးသွားကြကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
မကြာသေးမီကလည်း မန္တလေးမြို့တွင် ရွှေဆိုင်တဆိုင်ကို ဓားပြဝင်တိုက်ရာ ရွှေသား ၂ ပိဿာခန့် ပါသွား သည်ဟု ဒေသခံ များထံမှ ကြားသိရသည်။
“လုယက်မှုတွေ၊ ဓားပြမှုတွေကတော့ ကြားနေရတာပဲ။ မိတာကော၊ မမိတာကော ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပြီးမှ တရားခံကို လိုက်ဖမ်းတာလေ။ လူတွေကို အကာအကွယ် မပေးနိုင်တာတော့ သေချာတယ်” ဟု သုဝဏ္ဏမြို့ နယ်တွင် နေထိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
“ရဲတွေက နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့တာဝန်က လူဆိုးတွေကို ဖမ်းဖို့မဟုတ်ဘူး။ လူ ကောင်း တွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့” ဟု သူက ဆိုသည်။
Posted by အာဇာနည် at 10:00 PM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 8:11 PM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 8:03 PM0comments
ရွှေဝါရောင် သံဃာ့အရေးခင်းကြီးကို အမှတ်တရ သုံးသပ်ခြင်း။
ပြီးခဲ့တဲ့(၂၀၀၇) ရွှေဝါရောင် သံဃာ့ အရေးခင်းကြီးကို မြန်မာပြည်သူတွေကော ကမ္ဘာ့ ပြည်သူတွေပါ ထာဝရ အမှတ်ရနေကြ ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကတော့ ဒီလို ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ စုပေါင်းလမ်းပေါ်ထွက် တောင်းဆို၊ ဆန္ဒပြ၊ ဆုတောင်းမှုမျိုးကို ပြီးခဲ့တဲ့(၂၀၀၇) ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှလွဲ၍ ဘယ်တုန်းကမှတွေ့ မြင် ခဲ့ ဖူးခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်များ လမ်းမပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် ထွက်လာခဲ့ကြရပါသလဲ။ အ ဖြေ ကတော့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ အာဏာရှင်များ လက်အောက်က ရုန်းထွက်ကြဖို့ပါပဲ။ စစ် အာဏာရှင်များ အဓမ္မဝါဒီနဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ် ကြီးစိုးနေမှုကို မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ တပည့်သား သံဃာတော်များက ဓမ္မဆိုတဲ့တရားနဲ့ တွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင် ဒီလှိုင်းများပါပဲ။ ဒီရွှေဝါရောင် တော်လှန် ရေးလို့ခေါ်တဲ့ သံဃာတော်များ ဦးဆောင်တဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှု အပေါ် နည်းနည်းလောက် ပြန်ဆန်းစစ် ကြည့် ချင်ပါ တယ်။
ဆန်းစစ်ကြည့်မှလည်း ဦးဇင်းတို့ ကောက်ချက်တစ်ခုကို ချနိုင်မှာပါ။ ဒီကောက်ချက်ဟာ ဦးဇင်းတို့ ရှေ့ဆက် ချီတက်ရမယ့် တော်လှန်ရေး ခရီးအတွက် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဖြေက တော်တော်လေးပြောမှ ပြည့်စုံမှာပါ။ ဒါကြောင့် လတ်တလော အခြေအနေတွေ ကိုပဲ အဓိကထား သုံးသပ်ကြည့်ပါရစေ။ အရင်ဆုံး စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် န-အ-ဖဟာ သပ်လျှိုသွေးခွဲတဲ့ စနစ်ကို တွင်တွင် ကျယ် ကျယ်ကြီး အသုံးပြုနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့၊ စွမ်းအားရှင်တွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာတွေ ပေးပြီး ပြည်သူ တွေနဲ့ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခဲ့သလိုပဲ နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာ နာယက ဆရာတော်များနဲ့ အောက်ခြေ သံဃာ တော်များကိုလည်း နည်းအမျိုး မျိုးနဲ့ သွေး ခွဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ရသလဲဆိုရင် ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ သံဃာထုရဲ့ သြဇာကြီးမားတာကို သိသလို ဒီသံဃာထု နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာ ပါဝင် လာမှာကိုလည်း ကြောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့ မ-ဟ-န ဆရာတော် များကို အမျိုးမျိုး ချဉ်းကပ်စည်းရုံးပြီး အောက်ခြေ သံဃာတော်များအပေါ် ဝိနည်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ တည်ဆဲဥပဒေများဖြင့် လည်း ကောင်း နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ဖိနှိပ်ခြင်းဖြင့် သံဃာထုကို သွေးခွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ သံဃာကို သင်းခွဲခြင်းဆိုတဲ့ သံဃာဘေဒကကံကို ကျူးလွန်လိုက်တာပါပဲ။ ဒေဝဒတ်လက်သစ်များလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီအချက်ဟာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကြီးကို သန္ဓေတည်စေခဲ့တဲ့ အချက်ပါ။
၂ဝဝ၇ သြဂုတ် ၁၉ မှာ လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေ မြင့်ပြီး ကားခတွေ ရုတ်တရက် ဈေးတက်ခဲ့လို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေ ဦးဆောင်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တာကို မတရား ဖိနှိပ် ဖမ်းဆီး ခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာ ၅ ပခုက္ကူမှာ ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ သံဃာ့အရေးကိစ္စမှာ သံဃာတော်တွေကို ကိုယ်ထိ လက်ရောက် စော်ကားခဲ့တဲ့ ကိစ္စပါ။ ရတနာသုံးပါးထဲမှာ တပါးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ သံဃာတော်တွေကိုတောင် စော်ကား ရဲတယ်ဆိုတော့ ကမ်းကုန်နေပါပြီ။
ဒီလို န-အ-ဖ စစ်အာဏာရှင်တွေ တိုင်းပြည်အပေါ် မတရား ဖိနှိပ်ပြီး အဓမ္မတရားတွေနဲ့ ကြီးစိုး နှိပ်စက် နေတာကို သံဃာတော်အရှင်မြတ် များက ဓမ္မနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ မြတ်စွာဘုရားရှင် ပညတ်တော်မူခဲ့တဲ့ အသမ္မုခတာ ကံရှစ်ပါးတွင် တပါးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆိုတဲ့ သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာ ၁၈ မှာ န-အ-ဖ စစ်အစိုးရကို သပိတ်မှောက် ကံဆောင်ကြ ရာမှ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကြီး စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပါတယ်။
သံဃာတော်အရှင်မြတ်များ စတင်ခဲ့တဲ့ ဒီအရေးတော်ပုံကြီးဟာ သံဃာတော် များအရေးကိစ္စမျှသာ မဟုတ် တော့ဘဲ ပြည်သူအားလုံးရဲ့ အရေးကိစ္စ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသား၊ ပြည်သူများပါ ပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့ပြီး အရှိန်အဟုန် မြင့်သည်ထက် မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ရှစ်လေး လုံးအရေးတော်ပုံကြီး ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်ပိုင်း ၁၉ နှစ်ကျော်အကြာမှာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ အရှိန်အဟုန်အကြီးဆုံး လူထုတိုက်ပွဲ တပွဲပါပဲ။
အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးဟာ အကျအဆုံးများစွာနဲ့ အဆုံး သတ်ခဲ့ရတယ်လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။ သံဃာထုနဲ့အတူ နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ မပါဝင်ခဲ့တဲ့အပြင် လျစ် လျူရှုခြင်းပါ ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ သံဃာထုအတွက် အနစ်နာဆုံးအချက်ပါ။ အကယ်၍ မ-ဟ-န ဆရာတော်များ ပါဝင်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင် န-အ-ဖ အနေနဲ့ ကိုင်တွယ်ရ တော်တော် ခက်သွားပါလိမ့်မယ်။ သို့ဆိုလျှင် ဒီအရေးတော်ပုံကြီးဟာ မအောင်မြင်ခဲ့ရင်တောင် အခုလို ရက်ရက်စက်စက် နှိမ်နင်းခံရလိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။
ပြည်သူအများစုဟာ ဘေးကနေ လက်ခုပ်တီးပေးရုံလောက်နဲ့ တာဝန်ကျေပြီလို့ ထင်နေကြတယ်။ ဒါဟာ အမျိုး သားရေး တာဝန်မဲ့မှု တရပ်ပဲ ဆိုတာကို မသိကြလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သို့ မဟုတ် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အချို့ ကြိုတင်အဖမ်းခံတားရခြင်းနှင့် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ခေါင်းဆောင်အချို့ ရဲ့ပြင်ဆင်မှုအားနည်းခြင်း ကြောင့်လဲပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။့ န-အ-ဖ အနေနဲ့လည်း ဘာကြောင့် ဒီလောက် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ကိုင်တွယ်လိုက်ရသလဲ။ ဒါဟာ အဓိကအချက်ပါ။ လှုပ်ရှားမှုကြီးဟာ တရက်ထက်တရက် အရှိန်အဟုန် ပိုပြင်းထန်လာခဲ့တယ်။ ဒါကို သူ တို့ကြောက်တာပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ၂ဝဝ၈ မေလမှာ ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်မယ်၊ ဒီဆန္ဒခံယူပွဲဟာ သူတို့ရဲ့ အနာ ဂတ်ပါ။ သူတို့စိတ်ကြိုက် ရေးဆွဲထားတဲ့ ဒီအခြေခံဥပဒေသာ အတည်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် စစ်တပ်က နိုင်ငံ တော်အာဏာရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံကို အလိုလို ပိုင်ဆိုင်သွားမှာပါ။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ရွှေဝါ ရောင်တော်လှန်ရေးကြောင့် ဆန္ဒခံယူပွဲကို ထိခိုက်မှာ အကြောက်ကြီးကြောက်ပြီး ရက်ရက်စက်စက် ဖြိုခွဲခဲ့ တာပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ဦးဇင်းတို့ရဲ့ ရွှေဝါရောင် ဒီလှိုင်းတွေ ရပ်တန့်သွားခဲ့ရတာပါ။
ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကနေ ရွှေဝါရောင်မျိုးဆက်သစ် သံဃာတော်တွေ၊ကျောင်းသား လူငယ်တွေ၊ အမြောက် အများ မွေးထုတ် ပေးခဲ့သလို၊ အနည်ထိုင်လုလုဖြစ်နေတဲ့ လူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ကို လှုပ်နှိုး ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက် ၂ဝဝ၄ မှာ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာ ညီလာခံကြီးကို ကျင်းပရန်ကြိုးစားပြီး ဘာသာရေးကို ခု တုံးလုပ်တတ်တဲ့ န-အ-ဖ စစ်အာဏာရှင်ကြီးများရဲ့ ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးကို ခွာချလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စကိုလည်း ကမ္ဘာက လျစ်လျှူရှုလို့ မရလောက်အောင်လည်း သိစေခဲ့ပါတယ်။
အဓိကကျဆုံးအချက် ကတော့ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်များဟာ ပြည်သူရဲ့ဆွမ်းကိုစားပြီး နေသာသလို မနေ ခဲ့ပါဘူး။ ပြည်သူတွေရဲ့ အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းတွေကို ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တသားတည်း ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရဲတဲ့ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင် တွေ ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကို ပြသလိုက်တာပါပဲ။
နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ထိုက်သင့်တဲ့အောင်မြင်မှုတော့ ရခဲ့ပါတယ်။ သာသနာ့အလံတော်ကို အမြင့်မားဆုံး လွှင့်ထူပြီး ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးမှာ ကမ္ဗည်းမော်ကွန်း တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ၊ ပြည်သား ဒါယကာ ဒါယိကာမတွေအတွက် သံဃာ တော် အရှင်မြတ်တွေဟာ် အားကိုးထိုက်တဲ့ ကိုးကွယ်ရာအစစ်တွေ ဖြစ်ကြတယ် ဆိုတာကို သွေးနဲ့ သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာလည်း မြန်မာရဟန်းတော်များဟာ သမိုင်းအစဉ်အလာ မညံ့ဘူးဆိုတာသိအောင် ရွှေဝါရောင်သမိုင်းအသစ်ကို ရေးထိုး လိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် စစ်ပွဲရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် အထိနာခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ပေးဆပ်မှုတွေ တအားများလွန်း လို့ပါ။ ဒီလှုပ်ရှားမှု အတွင်းမှာ သံဃာတော်နဲ့ ကျောင်းသား ပြည်သူများစွာ အသက်ပေးခဲ့ရသလို၊ ဖမ်းဆီး ထောင်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ အချို့မှာ ယခုတိုင် ပုန်းရှောင်နေရပြီး၊ အချို့က တိုင်းတပါးသို့ ထွက်ပြေး ခိုလှုံခဲ့ကြရပါတယ်။ ပြည်တွင်း အတိုက်အခံအင်အားစုများ တော်တော်ကို အင်အား ချည့်နဲ့သွားတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ရောက်ခဲ့ရတာဟာ စစ်ချီ၊ စစ်တက်၊ စစ်ထိုး၊ စစ်ခံ၊ စစ်ဖျက်၊ စစ်ပြန် ဆိုတဲ့ စစ်ရဲ့ အစီအရင်တွေနဲ့ မပြည့်စုံလို့ပါ။ အကြမ်းဖက် ကိုင်တွယ်မယ်ဆိုတာ သိပြီးသား ဖြစ်ပါလျက် အဲဒီအခြေအနေကို အဆုတ်အတက် မလုပ်နိုင်ခဲ့တာလည်း ပါပါတယ်။
သံဃာထုရဲ့နိုင်ငံရေးနည်းပရိယာယ် မကြွယ်ဝမှုကြေင့်လဲပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကြမ်း မဖက်နိုင်အောင် ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ ထိရောက်တဲ့ ဖိအား မပေးနိုင်ခဲ့တာ၊ နောက်ဆက်တွဲ အဖမ်းအဆီးကိစ္စကို ရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ဝပ်ကျင်းကို ကြိုတင် မဖန်တီး နိုင်ခဲ့တာတွေဟာ အားနည်းချက်တွေလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒီကောက်ချက်ကိုချတာဟာ ဘယ်သူကိုမှ ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အခြေအနေတခုကို မတူတဲ့ ရှုထောင့်ကရော၊ တူတဲ့ရှုထောင့်ကပါ အမှန်အတိုင်း သုံးသပ်ကြည့်တာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ရှစ်လေး လုံးပြီးကတည်းက အင်အားကောင်းတဲ့ လူထုတိုက်ပွဲဆိုလို့ ဒီရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုဟာ ပထမဆုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းသာ ဆက်သွားနေရင် ဦးဇင်းတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ဟာ ဘယ်မှာလဲလို့ မေးစရာ ဖြစ်လာ ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် နောက်တကြိမ်မှာ ဦးဇင်းတို့လှုပ်ရှားမှုဟာ အရင်းနည်းနိုင်သမျှနည်းပြီး အမြတ်များများ လိုချင်ပါတယ်။ ဒီအားနည်းချက်တွေကို နိုင်ရာနိုင်ရာ ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ဆီး ကြမယ်ဆိုရင် ပန်းတိုင်ဟာ လက်တကမ်းကို ရောက်လာမှာပါ။
အခုဆိုရင် သံဃာတော်တွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်။ သီလရှင် ဆရာကြီး ဆရာလေးတွေကိုလည်း ဒီလိုပဲ မတရားသဖြင့် ဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်။ မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်နှင့် သာသနသိပ္ပံကျောင်းတို့ကို ချိတ်ပိတ်ပစ်လိုက်သလိုမျိုး ကျောင်းတိုက် တော်တော်များများကို စာဝါတက်သံ တိတ်ဆိတ်သွားအောင် ပိတ်ဆို့ထားတယ်။ ဘာသာသာသနာကို ထွန်းကားပျံ့နှံ့အောင် စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးအောင် သာသနာပြုနေကြတဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံကို သာသနာပြုနိုင်လောက်တဲ့ အရပ်ဒေသဖြစ်သွားအောင် မေတ္တာပို့ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့ သံဃာတော်များကို ရဟန်းအတုအယောင်များအဖြစ် ပုတ်ခတ် စော်ကားခဲ့တယ်။
သာသနာဆိုတာ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ အဆုံးအမ သြ၀ါဒများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်း အားဖြင့်ဆိုရရင် သစ္စာတရား သဘာဝအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်။ သတ္တ၀ါအများကို လမ်းကြောင်းမှန်အပေါ် တင်ပေးပြီး ဘ၀ရဲ့ပြဿနာ အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းနှင့် ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းမှုမျိုးစုံတို့က လွတ် မြောက်စေတတ်၊ သက်သာရာ ကိုပေးတတ်တဲ့ မီးရှုးတဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းမီးရူးတဆောင်ကြီးကို တွေ့ရှိသူဟာ ဗုဒ္ဓပင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ သစ္စဓမ္မတွေကို တွေ့ရှိ သိရှိပြီးဖြစ်လို့လည်း ဗုဒ္ဓ အမည်ရရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သစ္စဓမ္မကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ပြောဆို ဆုံးမ ချက်တွေ အယူအဆတွေ ၀ါဒတွေကို ဘာ သာရယ်လို့ နာမည်ပေးပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီသစ္စဓမ္မတွေကို နားလည် သ ဘောပေါက်ပြီး ရတနာသုံးပါးကို အားထားကိုးကွယ်ရာအဖြစ် လက်ခံကျင့်သုံးနေကြသူတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာရယ်လို့ နာမည်တခုနဲ့ ရပ်တည်ပြီးနေလာခဲ့တာဟာ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ငါးရာပင် ကျော်လွန်လို့ လာခဲ့ပါပြီ။ မြတ်ဗုဒ္ဓ မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း ရဟန်သံဃာ အစဉ်အဆက်က ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာသင်ယူ ကျင့်သုံး ၊ တပည့်ဒကာ ဒကာမတွေကိုလည်း လမ်းညွှန်ချက်တွေပေးပြီး လေ့လာကျင့်သုံးစေ ၊ အတုံ့ အပြန်အားဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေက ရဟန်သံဃာတွေကို ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့် ထောက်ပံ့ စသည်ဖြင့် ကျွန်း ကိုင်းမှီ ကိုင်းကျွန်းမှီ အနေနဲ့ သာသနာတော်ကြီးကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြလို့ ယနေ့ထိ သာသနာတော်ကြီးဟာ တည် တန့်နေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ ဒကာဆက်ဆံရေးမှာ တဖက်ဖက်က အားနည်းချက်တွေ ချွတ် ယွင်းချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါက ဗုဒ္ဓသာသနာဟာ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် နှစ်ဘက် လုံးမှာ ရှိသင့်တဲ့စွမ်းအင် အရည်အသွေးတွေ ပြည့်ဝဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင့်ငါးရာကျော်အထိ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးဟာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ် ဆိုရပေမဲ့ ချီတက်ခဲ့ရတဲ့ လမ်းကြောင်းဟာ အခါခပ်သိမ်း သာယာ ဖြောင့်ဖြူးခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြပ်အတည်း အခက် အခဲမျိုးစုံတွေနဲ့ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ ရတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒဟာ အိန္ဒိယ မြေပေါ်မှာ ပေါ်ထွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့တော့ သာသနာ့အလင်းရောင်ဟာ အဲဒီမြေပေါ်မှာ မှေးမှိန် သွားခဲ့ရပါပြီ။ အသောကမင်းကြီးနှင့် သူရဲ့မြေးတော်တွေ အစဉ်အဆက်ထိ အိန္ဒိယမြေပေါ်မှာ သင်္ကန်း အရောင်တွေ တောက်ပနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဗြဟ္မဏနွယ်ဝင် သုင်္ဂမင်းများလက်ထက်မှာတော့ ဗုဒ္ဓသာသနာ့ အရာင် အလင်းတွေဟာ ၄င်းမြေပေါ်က ပြောက်ကွယ်စပြုလာပါတော့တယ်။ သုင်္ဂခေတ် ဗြဟ္မဏပုဏ္ဏားတို့ရဲ့ လက် ထက်မှာ ဘုန်းကြီးခေါင်းတစ်လုံး ဖြတ်ယူဆက်သနိုင်ပါက ဆုတော်ငွေ-၁၀၀၀ ပေးမည်ဟု ကြေငြာလေရာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ရဟန်းမှန်သမျှ တိုင်းပြည်ရဲ့အစွန်အဖျားတွေကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ကြရပါတော့တယ်။
နောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့ မင်းအစဉ်အဆက်ဟာ သာသနာ့ အဆောက်အဦးတွေ ကျောင်းကန်ဘုရားတွေကို လုယက်ဖျက်ဆီး ရဟန်းသံဃာတော်တွေကို သတ်ဖြတ်စသည်ဖြင့် နှိမ်နင်းရာက သာသနာအလင်းရောင်ဟာ အိန္ဒိယမြေပေါ်ကနေ ပြောက်ကွယ်သွားသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် သာသနာတခု အရှည်တည်တန့်ရေးအတွက် အုပ်ချုပ်သူများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာလည်း အလွန်အရေးပါတယ်ဆိုတာကို သိသာနိုင်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်တပြည်မှာ အုပ်ချုပ်သူတွေဟာ လူအခွင့်အရေး ဘာသာရေးအခွင့်ရေးနှင့် လူဂုဏ် သိက္ခာ ကိုလေးစားတဲ့ အုပ်ချုပ်သူ အဖွဲ့အစည်းမျိုးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆောင် အယောင်လေးတွေကို လုပ်ပြနေရုံ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အဦးတွေကို မိုးထိအောင်တည်ဆောက်ပြနေရုံမျှနဲ့ သာသနာပြုမင်းပါလို့ ကြွေးကြော်နေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတခုတည်းက ဘာသာ သာသနာတခုကို ရေရှည်တည်တန့်အောင် မထ်ိန်းသိမ်း မစောင့်ရှောက်နိုင်ပါဘူး။ သာသနာကို ထိန်သိမ်း စောင့်ရှောက်သူ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အပေါ်မှာဘဲ အခြေခံတာာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးတွေဟာ အခြံ အရံအကြောင်းတရား တခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယမြေပေါ်က သာသနာ ဘာကြောင့် ပြောက်ကွယ်သွားရသလဲ ဆိုတာတွေကို သိရှိပြီးရင် ယနေ့မြန် မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် ရဟန်းသံဃာတော်တွေရဲ့ ဘ၀အခြေအနေတွေကို လေလာသုံးသပ် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယမြေပေါ်က အဖြစ်အပျက်နဲ့ ထပ်တူကြနေပါတယ်လို့ မဆိုလိုပေမဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာအ တွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပဏာမခြေလှမ်း ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကတော့ထင်ရှား နေပါတယ်။
ဘုရားဟော ပိဋကတ်တော်တွေထဲမှာပါတဲ့ သာသနာ ကွယ်ကြောင်းတရားတွေကို လေ့လာကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် ----------
(၁) မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်တွေကို ရိုသေစွာ နာကြားမှုမရှိခြင်း၊
(၂) စာပေသင်ကြားမှုတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားခြင်း၊
(၃) ဘုရားဟော တရားတော်တွေကို အာဂုံဆောင်ထားမှုတွေ ကွယ်ပြောက်သွားခြင်း၊
(၄) တရားတော်တွေရဲ့ ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်တွေကို နားလည်အောင်မလုပ်ခြင်း၊
(၅) တရားဓမ္မ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုတွေ မရှိတော့ခြင်း တွေဟာ သာသနာ ပျောက်ကွယ်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းတွေ ဖြစ် တယ်လို့ ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။
သာသနာတခု အရှည်တည်တန့်ရေးအတွက် ရဟန်းသံဃာတော်များ နှင့် ဒကာ ဒကာမများရဲ့ ကျွန်းကိုင်းမှီ ကိုင်းကျွန်မှီ သဘောကို အထက်မှာ တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရဟန်းသံဃာများဟာ ဘုရားဟော တရားတော်တွေကို လေ့လာသင်ယူခြင်း (ပရိယတ္တိ)နှင့် သိရှိထားသည့်အတိုင်း လက်တွေ့ အကောင်ထည် ဖေါ်ဆောင်ခြင်း (ပဋိပတ္တိ) တို့ဖြင့် သာသနာပြုနိုင်ရေးအတွက် ဒကာ ဒကာမတွေရဲ့ အထောက်အပံ့ကို မှီနေရ သူများဖြစ်ပါတယ်။ လူဒကာ ဒကာမတွေ အခက်ခဲ မျိုးစုံကြောင့် ရဟန်းသံဃာတွေကို မထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့ပါရင် ရဟန်းသံဃာတော်တွေ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဆက်လက်ရပ်တည် ရှင်သန်နိုင်ပါမလဲ။ ရဟန်းသံဃာတော်တွေမှ မရှိခဲ့တော့ပါလျှင် ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူတွေ မရှိတော့တဲ့အတွက် ဓမ္မဆိုတဲ့ သာသနာလည်း ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါအကြောင်း အချက်အလက်မျိုးစုံတွေကို သိရှိထားကြတဲ့ ရဟန်း သံဃာတော်တွေဟာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စစ်တင်ဘာလက ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းပေါ်တက်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့အခက်ခဲတွေကို ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စား ပြသခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာရဲ့အခြေခံ အကြောင်းတရားတွေကို လေ့လာပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းရမဲ့အစား ကြီးလေးတဲ့အပြစ်သဖွယ် သတ်မှတ်ပြီး ရဟန်းသံဃာတော်တွေကို ဖမ်းဆီး ရိုက်နှက် နေထိုင်ရာကျောင်းတွေကိုပိတ် နေထိုင်ရာကျောင်းတွေမှာ မနေနိုင်အောင် အာဏာပိုင် ဆိုသူတွေက ရက် စက်အတင့်ရဲ့စွာနဲ့ ကျူးလွန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံက ဖြစ်ခဲ့ပြီးနှင့် ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်စဉ်တွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြဿနာတစ်ခုရဲ့ဖြစ်စဉ် အကြောင်းစုံလင်တွေကို ရှာပြီးဖြေရှင်းဖို့မကြိုးစားဘဲ ပြဿနာရဲ့ အ၀န်းဝိုင်း တခုလေးကိုသာကြည့်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တယောက် အပြစ်ဖို့တာတွေ အင် အားကြီးသူတွေက အင်အားနည်းသူတွေကို အနိုင်ယူနေတာတွေကို တွေ့မြင်နေကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာပြေပြောက်ရေးကို အမှန်တကယ် လိုလားပါတယ် ဆိုရင် ဘာဖြစ် နေတယ် ဆိုတာလောက်မှာသာ ရပ်တန့်နေလို့မဖြစ်ပါဘူး ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာကို သုံးသပ်ပြီး ဖြေရှင်းပါမှ အမှန်တကယ် ပြဿနာ ရဲ့ပြေလည်မှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိ အခြေနေထိကတော့ မြန်မာပြည်က အာဏာပိုင်တွေဟာ ရဟန်းသံဃာတွေအပေါ်မှာ အငြိုးကြီးစွာနဲ့ဘဲ ကန့်သတ်မှုတွေ မတရားချုပ်ချယ်မှုတွေ ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံတွေကို လွန်ကြူးနေကြဆဲပါဘဲ။အရင်က မြန်မာပြည်မှာ သံဃာတော်တွေ ရရှိတဲ့ အခွင့်အရေးတွေဟာ န.အ.ဖ စစ်အုပ်စုမပြုတ်သ၍ ပြန်လည်ရရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ။ အကျိုးဆက်အဖြစ် စာပေသင်ကြားမှုတွေ တရားဟောကြားမှုတွေ တရားအားထုတ်မှု စတဲ့ ဘာသာရေး လုတ်ငန်းစဉ်တွေကိုပါ ထိခိုက်လာနေတဲ့အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ သာသနာပြောက်ကွယ်သွားသလို ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဗုဒ္ဓသာသနာကွယ်ပြောက်ဖို့ လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ဦးတည်နေတယ်လို့ဆိုရင် လွန်မယ်မထင်ပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက အနာဂါတ် ဗုဒ္ဓသာသနာအရေးဟာ ယခုအတိုင်းသာ ဆက်သွားခဲ့ပါရင် အလွန်တရာမှ ရင်လေးစရာ ကောင်းလှပါတော့ တယ်။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးရဲ့အကျိုးဆက်ဟာ သံဃာအားလုံး ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာရှင် စစ်ဝါဒီတို့သည် "ရဟန်းစစ် ရဟန်းမှန်၊ သံဃာစစ် သံဃာမှန်" တို့ အား "ရဟန်းတု ရဟန်း ယောင် သံဃာတု သံဃာယောင်"ဟုစွပ်စွဲကာ ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ပတ္တ နိက္ကုဇ္ဇကံ ဆောင် ကြသော သံဃာတော်များသည် အစစ်အမှန် ဟုတ်မဟုတ် ကို မြန်မာကသာမက ကမ္ဘာကပါ ယခုအခါသိရှိပြီး ဖြစ်သည်။ ကံဆောင်သံဃာတော်များ၏ လုပ်ရပ်သည် ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ်တော်များနှင့် ကိုက်ညီ သော ကြောင့်သာ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိရဟန်းရှင်လူအပေါင်းတို့က အသိအမှတ်ပြု လက်ခံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အာ ဏာရှင် စစ်ဝါဒီတို့မှာကား "အမှားကို အမှန်၊ အမှန်ကို အမှား" ထင်မှတ်ယူမှား၍ ထင်တိုင်းကြဲ နေကြ သဖြင့် ဘာမှ မပြောလိုပါ။ သို့သော် တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြသော ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသား များအနေဖြင့် တပ်မတော်ကို ခုတုံးလုပ်၍ ကိုယ်ကျိုးရှာနေကြသော အာဏာရှင် လူတစ်စုတို့အား စုပေါင်း ညီညာစွာဖြင့် တွန်းလှန်ကာကွယ်ကြပါ။ အမျိူးဘာသာ သာသနာတော်ကို ကိုယ်ပိုင်အသိ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ဓါတ် တို့ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ် ထိမ်းသိန်းစောင့်ရှောင့်ကြပါဟု တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
ထို့အပြင် လူသတ်ဝါဒကို အားပေးသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ လူသတ် ၀ါဒီတို့နှင့် စီးပွါးရေး လူမှုရေး သာရေးနာရေးစသော အဆက်အသွယ်များကို လည်း လုံးဝမလုပ်ကြဘဲ ရှောင်ကြဉ်ကြပါဟု ပြောလိုပါသည်။ လူသတ် ၀ါဒီတို့မှာ ကံကြီးထိုက်ပြီးသူများဖြစ်သဖြင့် ခုရော နောင်ပါ အကျိုးယုတ်ဖို့ ရုံသာရှိတော့ သည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် ပေါင်း ဖော်မိပါက အကုသိုလ်ကံတို့သည် မိမိတို့ထံသို့ ပူးဝင်ကပ်ရောက်လာနိုင်သဖြင့် ဝေးစွာရှောင်ကြဉ်ကြရန် တိုက်တွန်းရခြင်းပင်ဖြစ် ပါသည်။ အာဏာရှင်တို့သည် မိမိတို့၏ ဒုစ္စရိုက်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားနေကြသော် လဲ မအောင်မြင်တော့ပေ။ အာဏာရှင်တို့က သူတို့ပိုင် မီဒီယာများမှ တစ်ဆယ့် နှစ်လတာ ကာလပတ်လုံး လိမ် ညာလှည့်စား၍ ၀ါဒဖြန့်နေကြသော်လည်း ပြည်သူတို့က မယုံတော့ပေ။ "ချောက်ထဲကို ကျလုလုဖြစ်နေသော နိုင်ငံတော် ကြီးကို စစ်တပ်က အချိန်မနှောင်းမီ ကာကွယ်လိုက်ရတာပါ" ဟု အသံကောင်း ဟစ်နေကြသော အာဏာရှင်တို့သည် သူ့တို့စကားကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ချေဖျက်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာ အရေးတော် ပုံတွင် ထိုဖြစ်ရပ်မှန်များကို ကမ္ဘာကပါ သိရှိခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ မတရားမှုများကို ကမ္ဘာသိအောင် ကြေငြာသူမှာ အခြားသူများမဟုတ်ဘဲ မိမိတိုိ့ကိုယ်တိုင်သာဖြစ်သည်ကို သသောပေါက်ကြသင့် ပါသည်။
အကြွင်းအကျန်မထားဟုဆိုကာ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများကို ဖမ်းဆီး နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်နေရုံမျှဖြင့် ပြဿနာ များ ပြေငြိမ်းပြီးပြတ်သွားမည် မဟုတ်ပါချေ။ ရန်ကိုရန်ချင်းမတုဘဲ မေတ္တာစစ် မေတ္တာမှန်ဖြင့် အဖြေရှာမှသာ အ ဖြေမှန်ကို ရပေမည်။ ဓမ္မကို မျက်ကွယ်ပြု၍ အဓမ္မ၀ါဒကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးနေပါက ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ် တူးသလို ဖြစ်တက်သည်ကို သဘောပေါက်သင့်ကြပေ သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် စက္ကန့်မလပ် နာရီ မလပ် ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲ နေကြသော ဖြစ်ရပ်မှန်များကို သင်ခန်းစာအဖြစ် မှတ်ယူပြီး အချိန်မနှောင်းမီ ပြည်သူ့ ဆန္ဒနှင့်အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ရပါ သည်။
၁။ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ငွေကြာယံကျောင်းတိုက်၊
၅။ တာမွေမြို့နယ်၊ နတ်ချောင်းရပ်ကွက်၊ ဓမ္မသုခစာသင်တိုက်၊
၆။ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ မင်္ဂလာရာမစာသင်တိုက်၊
၈။ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ မိုးကောင်းကျောင်းတိုင်၊
၉။ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်၊
၁၄။ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ သာသနာ့သိပ္ပံကျောင်းတိုက်၊
၁၆။ ဒဂုံမြို့သစ်၊ တက္ကသီလာဇေယျသိဒ္ဓိပဋ္ဌာန်ကျောင်းတိုက်၊
၁၇။ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ သီရိဇေယျကျောင်းတိုက်၊
----အစရှိသော စာသင်တိုက် ကြီးများနှင့်ကျောင်းတိုက်များမှ သံဃာတော်များသည် ရဟန်းတုများဖြစ် ပါသလော၊ လောင်းကစား၊ မူးယစ်ဆေးဝါးစသည် ပြုသော ရဟန်း သံဃာတော် များပေလော စသည်ဖြင့် စဉ်း စားဖွယ်ရာဖြစ်၏။ ဖော်ပြပါကျောင်းတိုက်များ မှာ အစိုးရပိုင်မီဒီယာမှ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုရေး သားချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အထက်ပါကျောင်းတိုက်များမှ သံဃာတော်များ အဘယ်သို့ရောက်ကုန်ကြပြီလဲ၊ ငွေကြာယံဆရာတော် ဘယ်နေရာသို့ ရောက်နေသလဲ၊ မဂ္ဂင်ကျောင်းဆရာတော် ဘယ်နေရာသို့ ရောက် နေသလဲ၊ တက္ကသီလာဇေယျသိဒ္ဓိပဋ္ဌာန်ကျောင်း ဆရာတော် ဘယ်နေရာသို့ ရောက်နေသလဲ၊ သူတို့ သတ်ဖြတ်ပြီး မြစ်ထဲသို့ ပစ်ချထားသော ရဟန်းအလောင်းများက ဘယ်သူတွေလဲ၊ နအဖစစ်ခွေးများ ပစ် ခတ်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရဆေးရုံသို့ ရောက်နေသော သံဃာတော်များက ဘယ်အရာတွေလဲစသည် စသည်ဖြင့် စဉ်းစားဖွယ်ရာ ဖြစ်မိ၏။
မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်ရှိ မ.ဟ.န ဘုန်းတော်ကြီးများသည် နိုင်ငံတကာ ထုတ်လွင့်ခဲ့သော သတင်းများ၊ ဓာတ် ပုံများကို ကြည့်ရှုမိပါ၏လော၊ အင်တာနက်၊ အီးမေလ်ဆိုသည်ကို သိပါ၏လော၊ ဤကဲ့သို့ ရက် စက်ကြမ်းကြုတ်သော နအဖ၏ လုပ်ရပ်ကို ကိုယ်တိုင်းတွေ့မြင်ကြားသိပါလော၊ မျက်စိမှိတ်၊ နားပိတ်ပြီးတော့ နအဖစစ်ခွေးများ၏ အလိမ်အညာ ပြည်တွင်းဖြစ် မီဒီယာများ ကိုသာမှီငြမ်းကိုးကား၍ ထိုသို့ဖြစ်ရပ်မှန်ဟု စာရေး သားပေးပို့ခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဆိုသော စကားနှင့် ညီညွတ်ပါလော၊ မိမိ၏ညဏ်ဖြင့်စဉ်းစားပြီး (ကေသမုတ္တိသုတ်တော်)လာ ဘုရားရှင်၏စကားကို ကိုးကား၍ ပြောဆိုသော စကားဟုတ်ပါ၏လော၊ စသည် စ သည်ဖြင့် အလွန်ပင်တွေးကြည့်စရာ ကောင်းပါ၏။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရသော် ရန်ကုန်မြို့နှင့် အခြားမြို့နယ်အသီးသီးမှ ပျောက်ဆုံးနေကြကုန်သော သံဃာတော်များ အ ဘယ်သို့ရောက်နေပါသနည်း၊ ဂျီတီအိုင်ကျောင်းဟောင်းအတွင်း ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရသော သံဃာ များသည် အဘယ်တိုင်းပြည်က သံဃာတော်များပါနည်း၊ ကဘော်ချိုင့်ဝှမ်းသို့ အပို့ခံရသော သံဃာ တော်များသည်လည်း မည်သည့်နေရာက သံဃာတော်များပါနည်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးသင်တန်းတွင် ဒေသခံကလေးသူငယ်များအား ပညာဒါနဝေငှ ပေးနေသော သိရီ လင်္ကာပြန် ဆရာတော်ဦးသီလာဝံသ(M.A.Sri Lanka) ပျံလွန်တော်မူခြင်းသည် မည်သူ၏သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါသနည်း။စဉ်းစား သုံးသပ်စေလို ပါသည်။
သာသနာ့တက္ကသိုလ်၊စာသင်တိုက်များမှ သာသနာ့ မှတ်ပုံတင်များဖြင့် နယ်စပ်ဒေသ၊ တတိယနိုင်ငံများသို့တိမ်းရှောင်ခဲ့ရသော ရဟန်းတော်များက မြန်မာပြည်မှ သံဃာအစစ် အမှန်များ ဖြစ်ကြောင်း ယခုအခါ အခက် အခဲ အားလုံးကျော်ဖြတ်ကာ သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုစွပ်စွဲပြောဆိုကြပါစေ ပတ္တမြားမှန်လျှင်နွံမနစ်ကြောင်း ကမ္ဘာကို သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ် ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
ရွှေဝါရောင် သောတုဇန ဘိက္ခူ သံဃာ့အဖွှဲ.ကြီး (SYMO) ( www.symo.isgreat.org )
Posted by အာဇာနည် at 3:28 PM0comments
အတိုက်အခံဘက်က ရှေ့ နေ အလျှောက်ကောင်းတာ.. လျှာရှည်မှုနဲ့ ခွေးဆွဲသွားပြန်ပကော။ ရှေ့ နေတောင် သူ့ ဘက်ကရှိမှတဲ့ တဖက်စောင်းနင်း နအဖ..
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆိုတာ ဘာလဲဗျို့ 
ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ရုံးတင်စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်နေတဲ့ တရားခွင်တွေမှာ အနှောင့်အယှက်၊ အဟန့်အတားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ အရေး ယူ အပြစ်ပေးတာတွေကို အာဏာပိုင်တွေဘက်က အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဆက်တိုက် ဆိုသလို လုပ်လာတဲ့နေရာမှာ အခုနောက်ဆုံး အမှုမှာ လိုက်ပါကူညီပေးနေတဲ့ ရှေ့နေ ကိုပါ ထောင်ချလိုက်တဲ့အထိ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို မနေ့က ထောင်ဒဏ်စီရင်ခဲ့သလို ဒီနေ့လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ အမှုတွေမှာ ဥပဒေအကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေတဦးနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့ကို အလားတူ စီရင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို မကြာသေးခင်လတွေကစလို့ ရုံးတင်စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်တဲ့နေရာမှာ တရားခွင်ကို မထီမဲ့မြင်လုပ်တာဆိုပြီး အာဏာပိုင်တွေဘက်က အရေးယူ အပြစ်ပေးမှုတွေ လုပ်လာတဲ့နေရာမှာ ဖမ်းဆီးခံ
နေရသူတွေအတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ လိုက်ပါကူညီပေးနေသူ ရှေ့နေတွေပါ ပါဝင်လာခဲ့တာပါ။ အခုနောက်ဆုံးဆိုရင်လည်း ဒီလိုစွပ်စွဲခံခဲ့ရတဲ့ လူငယ်ရှေ့နေတွေဖြစ်ကြတဲ့ ကိုစောကျော်ကျော်မင်းနဲ့ ကိုညီညီညီထွေးတို့ ၂ ဦးအနက်၊ ကိုညီညီထွေးနဲ့ သူတို့
လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ အမှုသည်တွေဟာ တရားခွင်ကို မထီမဲ့မြင်လုပ်တယ်ဆိုပြီး ထောင်ဒဏ် ၆ လ အသီးသီး အပြစ်ပေးခံခဲ့ရတာလို့ နီးစပ်သူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုဝင်တွေက ပြောပြကြပါတယ်။
အဲဒါကို ရှေ့နေ ညီညီထွေးရယ်၊ ရန်နိုင်ထွန်းရယ်၊ မျိုးကျော်ဇင်ရယ်၊ အောင်မင်းနိုင်ခေါ်မီးသွေးဆိုတဲ့ လေးယောက်ကို ၆ လဆိုပြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက ဒီနေ့ ချလိုက်တယ်။ ရှေ့နေက အဲဒီမှာတင်ထားတာ ညီညီထွေးရယ်၊ စောကျော်ကျော်မင်းရယ်။
"ဒီဘက်ကတော့ အာမခံရမယ်ထင်ပြီးတော့ ညီညီထွေးအတွက် အာမခံပြင်ထားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ဘေးပေါက်ကနေ ထုတ်လာပြီး တခါတည်းတင်လိုက်တယ်။အာမခံလိုက်မယ့်လူတွေတောင် မသိလိုက်ဘူး။ အမိန့်တခါတည်းချလိုက်ပြီးတော့
အခုပြစ်ဒဏ်စီရင်ခဲ့တဲ့ စွပ်စွဲချက်အရဆိုရင် အာမခံပေးနိုင်တဲ့အမှု ဖြစ်ပေမယ့်လို့အာမခံတင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေလည်း မရ၊ သက်ဆိုင်ရာ မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းအသိပေးတာတွေမရှိဘဲ ဒီလို အစစ်ဆေး အမေးမြန်းမရှိ ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ခဲ့တာ
"ကျနော်တို့က တရားခံတွေထုတ်လာတဲ့ ရှေ့တည့်တည့်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်နေတာ။ တရားခံတွေထုတ်နေကျ အဲဒီကပဲ ထုတ်တယ်။ အခုက နောက်ပေါက်ကနေ မသိမသာ ကျနော်တို့မသိအောင် ထုတ်သွားတယ်။ ထုတ်ပြီးတော့ ရုံးတင်ပြီး အမိန့်
တန်းချလိုက်တယ်။ ကိုညီညီထွေးကတော့ တရားသူကြီးကိုပြောတယ်၊ ကျနော်တို့ကို ခုခံချေပခွင့်ပြုဖို့၊ ရှေ့နေငှားခွင့်ပေးဖို့။ အဲလိုတင်ပြတာကို ဘာမှစကားမရှည်နဲ့တဲ့၊ထပ်ပြီး ပုဒ်မကပ်ခံရမယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်တယ်တဲ့၊ တရားသူကြီးက။ အဲဒါ
"ကျနော်တို့ ရှေ့နေ ရှေ့ရပ်တွေနဲ့ အာမခံလုပ်ဖို့ဆိုပြီး အာမခံတွေလည်းခေါ်၊ အကုန်လုံးရောက်နေတယ်။ အာမခံတယောက်ကို နှစ်ယောက်၊ အားလုံး အာမခံ လေးယောက်တောင်ကျော်တယ်၊ ထိုင်ပြီး အသင့်စောင့်နေကြတာ။ အဲလိုစောင့်နေကြတာကို အသိ
လည်းမပေးဘူး၊ မိသားစုဝင်တွေကိုလည်း အသိမပေးဘူး။ ဒီလိုရုံးထုတ်လာမယ်၊ ဒီနေ့ တရားစီရင်မယ်၊ တရားစီရင်တဲ့အခါလည်း ရှေ့နေတွေဘာတွေနဲ့ ခုခံချေပခွင့်တွေလည်း ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်း လုံးဝ မရှိခဲ့ဘူး။ တရားရုံးက အဲဒါတွေကို လုံးဝ
ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ မိသားစုတွေကလည်း ကျေနပ်မှု လုံးဝမရှိဘူး။ ဒီလိုမျိုးတဖက်သတ်လုပ်သွားတဲ့ကိစ္စကို။"
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲတုန်းက ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး တောင်းဆိုခဲ့သူတွေ၊ သံဃာတော်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကို ရုံးတင်စစ်ဆေးတာ တွေ လုပ်တဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဘက်က သူတို့ရသင့်တယ်လို့
ယုံကြည်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို တောင်းဆိုတာတွေ၊ အပြန်အလှန် ချေပတာတွေရှိလာတဲ့နောက် အခုလို အာဏာပိုင်တွေဘက်က စွပ်စွဲချက်တွေ ထွက်ပေါ်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံး ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေ အပါအ၀င် တက်ကြွ
လှုပ်ရှားသူတွေ အရေးယူခံရတဲ့ အခြေအနေအထိ ဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတချို့ကိုလည်း ဒီ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုဝင်က ပြောပြပါသေးတယ်။
"ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ရုံးချိန်း ချိန်းတယ်။ ချိန်းတဲ့အခါ ဦးတင်ဦးတို့ သန့်ဇင်မျိုးတို့အားလုံး ၁၁ ယောက်ကို ရုံးထုတ်လာတယ်။ အဲဒီမှာ ရန်နိုင်ထွန်းက ထပြီး ကျနော်တို့ ဒီအမှုက ဖမ်းပြီးတော့ ပြန်လွှတ်တာ တနှစ်ကြာပြီ။ တရားဝင် နိုင်ငံတော်အစိုးရက သတင်းစာက ကြေညာပြီး လွှတ်တာ။ မိဘသဖွယ် သဘောထားကြီးစွာနဲ့ ဆိုဆုံးမ၍ ပြန်လွှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ရန်နိုင်ထွန်းက ထပြီးလျှောက်တာ။
"ကျနော်တို့ကို ပြန်လွှတ်တယ်ဆိုတာ ရဲချုပ်ခင်ရီလည်း သိတယ်၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်းလည်း သိတယ်။ အဲဒါကို ရုံးပေါ်သက်သေအဖြစ် ခေါ်ပေးပါလို့ ပြောတဲ့အခါ တရားသူကြီးက တားတယ်။ တရားသူကြီးက ခင်ဗျားတို့အမှုသည်ကို ထိန်းပေးပါဦးဆိုပြီး ပြောတယ်။
"အဲဒီမှာ ကိုညီညီထွေးက ထပြောတယ်။ ကျနော်တို့ ရှေ့နေဆိုတာ အမှုသည်တွေရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရပဲ လုပ်လို့ရတယ်၊ လုပ်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့။ အမှုသည်တွေက လွတ်လပ်စွာ ပြောတာ၊ တရားဝင်ပြောတာကို ကျနော်တို့ တားမြစ်ခွင့် မရှိဘူးတဲ့။ အဲဒါလေး
ပြောလိုက်တာ။ ဒါဆိုရင် တာဝန်မယူဘူးပေါ့လို့ တရားသူကြီးက ပြောတယ်။ အဲလို ပြောပြီးနောက်ပိုင်း အဲလိုတွေ ဖြစ်လာတာပဲဗျာ။"
မနေ့တုန်းကလည်းပဲ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ၉ ဦးကို အလားတူ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ပဲ ထောင်ဒဏ် ၆ လစီ အသီးသီးချမှတ်ခဲ့တာပါ။ အစောပိုင်းမှာတုန်းက ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဘက်က သူတို့ကို တရား
ရုံးတင် စစ်ဆေးရာမှာ လက်ထိပ်ခတ်တာ၊ ခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက် တာ စတာတွေကို ကန့်ကွက်တောင်းဆိုမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် ဒါတွေမရတဲ့အပြင် မိသားစုဝင်တွေ တရားခွင်လာရောက်ခွင့်ကိုပါ ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်လည်း ထိန်းသိမ်းခံနေရ
သူတွေဘက်က တရားခွင်မှာ ကန့်ကွက်တာတွေ၊ အချေအတင်ဖြစ်တာတွေ ကြီးထွားလာခဲ့တာပါ။
မနေ့တုန်းက ဒီလို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကို စီရင်ချက်တွေ ချမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်လည်း တရားစီရင်ရေးစနစ်ဟာ မျှတမှုမရှိဘူးလို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် တရားခွင်ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ရှေ့လျှောက် လက်ခံတော့မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်း
ဒီကနေ့ အင်းစိန်ထောင်တွင်း သီးသန့်တရားစီရင်ရာမှာ ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောပါတယ်။ http://www.voanews.com/burmese/2008-10-30-voa4.cfm
Posted by အာဇာနည် at 2:05 PM0comments
Posted by အာဇာနည် at 1:42 PM0comments
ဒို့ အမျိုးတွေရဲ့ အပြုံးတွေ မပျောက်ကွယ်စေအောင် ထိမ်းသိမ်းရန် သင့်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်.
Posted by အာဇာနည် at 1:27 PM0comments
Myanmar6Months On: Delivering Education in Emergencies
Posted by အာဇာနည် at 1:22 PM0comments
Posted by အာဇာနည် at 1:09 PM0comments
နိူုင်ငံခြားကခလေးတွေ တောင် တော်လှန်ရေးတရပ်လိုအပ်နေကြောင်း သိနေကြပါပြီ. ကျနော်တို့ ခလေးတွေ ကရောဗျာ..
How to kill PrivateCam.exe virus?
Posted by: ppshein on: October 24, 2008
In: Informations Comment!
2. Copy and paste followings. (Red colored sentences)
4. Change file extension from .txt to .bat (don’t save with richtextformat *.rtf)
6. Search and Delete the file name: privateCam_v0.1.exe in your computer.
Note: Disable any kinds of anti-virus from your computer before you run .bat file.
Tags: gtalk, privatecam.exe, virus
Posted by အာဇာနည် at 5:28 AM0comments
( န အ ဖ ) တို့ပြော သော တိုး တက် နေ သော မြန် မာ ပြည် ။ ( အ ပိုင်း ၁၂ )
ပျောက် ကွယ် ဆုတ် ယုတ် လာ နေ သော ဘာ သာ ရေး ဆိုင် ရာ ပွဲ တော် များ ။
အောက် တို ဘာ လ ( ၂၈ ) ရက် ဆို ရင် ၊ သီ တင်း ကျွတ် လ ကွယ် သွား ပါ ပြီ ။ ယ ခု တန် ဆောင် မုန်း လ ကို ရောက် ခဲ့ ပါ ပြီ ။ ငယ် စဉ် က ကြား ခဲ့ ဖူး သော သီ ချင်း စာ ချိုး လေး တစ် ပိုင်း တစ် စ ကို သ တိ ရ မိ ပါ တယ် ။ ( တန် ဆောင် မုန်း တန် ဆောင် တိုင် ၊ ဆီ မီး ရယ် က မြိုင် မြိုင် ဆိုင် ဆိုင် ) ။ တန် ဆောင် မုန်း လ မ တိုင် မီး သီ တင်း ကျွတ် လ မှာ ဆို ရင် တော့ ရန် ကုန် အ ရှေ့ ပိုင်း က ( ရေ ကျော် ၊ ပု ဇွန် တောင် ) ကျောက် မြောင်း ၊ စ တဲ့ နေ ရာ တွေ မှာ ပွဲ လမ်း သ ဘင် တွေ နဲ့စည် ကား ခဲ့ ပါ တယ် ။ ကြည့် မြင် တိုင် ၊ က မာ ရွတ် လှည်း တမ်း ၊ တွေ မှာ လည်း တိုး မ ပေါက် အောင် ရှိ ခဲ့ ပါ တယ် ။ ပွဲ လမ်း သ ဘင် ဆို တဲ့ စ ကား နဲ့အ ညီ ၊ အ ငြိမ့် ပွဲ ၊ ဇတ် ပွဲ ၊ တေး သ ရုပ် ဖေါ် ၊ stage show ၊ တွေ အ မျိုး မျိုး နဲ့၊ က စား စ ရာ ( ချား ၊ ရ ဟတ် ) အ ရုပ် မျိုး စုံ ၊ စား စ ရာ မျိုး စုံ တို့ဖြင့် ဝေ ဝေ ဆာ ဆာ ပျော် စ ရာ ကောင်း ခဲ့ ရ သော ( စာ ရေး သူ ) တို့၏ ငယ် ဘ ၀ ကို အ မှတ် တ ရ ရှိ မိ ပါ တယ် ။ ( ယ ခု ခေတ် လို ဈေး သည် များ စား စ ရာ များ သာ ရောင်း ချ နေ သော ) ဈေး ပွဲ တော် ( ပွဲ တော် အ တု ) မ ဟုတ် ပါ ချေ ။
သီ တင်း ကျွတ် ပွဲ တော် အ ပြီး ၊ တန် ဆောင် မုန်း လ အ ခါ မှာ ရောက် ရှိ လာ တဲ့ ပွဲ တော် က တော့ ( န က္ခတ် တာ ယာ ) စုံ လင် တဲ့ ( နက္ခတ် သ ဘင် ) တန် ဆောင် တိုင် ပွဲ တော် ပါ ပဲ ။ တန် ဆောင် တိုင် ပွဲ တော် ကို တော့ ၊ ရန် ကုန် မြို့အ နောက် ပိုင် လ သာ နဲ့လမ်း မ တော် မြို့နယ် တွေ မှာ ကျင်း ပ ကြ ပြီး ၊ ( လမ်း မ တော် မြို့နယ် ) က တော့ အ ဓိ က တိုး မ ပေါက် အောင် စည် ကား ခဲ့ သော မြို့နယ် တစ် ခု ပါ ပဲ ။
ပွဲ လာ ကြည့် သူ ဟာ ၊ လမ်း ထိပ် တိုင်း မှာ ရှိ နေ တဲ့ ( တေး သ ရုပ် ဖေါ် ) စင် တွေ ကို ကြည့် ရင်း ၊ လမ်း လျောက် စ ရာ မ လို ပဲ ၊ တစ် နေ ရာ မှ တစ် နေ ရာ ကို ( လူ စီး ကြောင်း ) နှင့် အ တူ ပါ သွား အောင် ပင် ၊ တိုး မ ပေါက် စည် ကား ခဲ့ ပါ တယ် ။
လမ်း မ တော် ( ၁၃ ) လမ်း၊ အောက် လမ်း ( ဦး ဘ ဂျမ်း ) လမ်း မှာ ဆို ရင် တော့ ၊ ကာ တွန်း ပြ ပွဲ က နာ မည် ကြီး ပါ တယ် ။ ခေတ် အ ဆက် ဆက် က မ မှန် မ ကန် လုပ် ရပ် များ ကို ကာ တွန်း များ ရေး ဆွဲ ပြီး ၊ ပြည် သူ ကို အ သိ ပေး သော မီ ဒီ ယာ လုပ် ငန်း ကို လုပ် ခဲ့ ကြ သော ကာ တွန်း ဆ ရာ များ ၏ လက် သံ ပြောင် မှု ကို ( ကာ တွန်း ဦး ဘ ဂျမ်း ) လမ်း မှာ မြင် တွေ့ရ မှာ ပါ ။
ည ဖက် ပွဲ ဈေး များ ၊ ဇတ် ပွဲ များ မ တိုင် မီ ၊ နေ့ဖက် ပိုင်း မှာ တော့ ၊ လမ်း များ အ လိုက် ပြု လုပ် ကြ သော ၊ ဆွမ်း ဆန် စိမ်း ( စာ ရေး တံ မဲ ) လောင်း လှူ ပွဲ ။ ပိုက် ဆံ ကျဲ သော ရွှေ မိုး ငွေ မိုး ရွာ ပွဲ ၊ ည ပိုင်း စ တု ဒီ သာ ကျွေး ခြင်း များ ဖြင့် ( ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ၀င် ) တို့၏ ကု သိုလ် ပြု ပွဲ များ ကား ၊ အံ့ မ ခန်း နိုင် အောင် ၀ ပြော စည် ပင် ခဲ့ဖူး ပါ သည် ။
ထို ခေတ် ကား ( န အ ဖ ) တို့ပြော သော တိုး တက် နေ သည့် ယ နေ့ကာ လ တွင် အ လုံး စုံ ပျက် သုန်း ခဲ့ ရ ပါ ပြီ ။
တန် ဆောင် တိုင် ပွဲ တော် က ( မုန့်ရောင်း၊ သီ ချင်း ဖွင့် ) ပြီး တော့ ဟို ဘက် လျောက် ၊ ဒီ ဘက် လျောက် ၊ ဘီ ယာ သောက် ၊ ဆေး ပြား မျို ၊ ရင် ပေါ် ဖင် ပေါ် ၀တ် ၊ ည ၁၂ နာ ရီ ဆို ရင် သိမ်း ၊ စည် ပင် က အ ကွက် ချ ၊ ( ရ ယ က ) က အ ကွက် ချ ပြီး ဈေး ရောင်း ဖို့နေ ရာ ရောင်း စား ၊ အိပ် ထဲ ထည့် ၊ ( မ ယ က ) ကို ( ရ ယ က ) က လာဘ် ထိုး ၊ လုံ ခြုံ ရေး တွေ က ဈေး သည် တွေ ဆီ က ပိုက် ဆံ မ ပေး ပဲ အ လ ကား စား ၊အို xxxxxxxxxxxxxဖြစ် ချင် တိုင်း ဖြစ် ၊ ပျက် ချင် တိုင်း ပျက် နေ တာ ပါ ပဲ ။
အ ဆိုး ဆုံး က တော့ xxxxx ဒီ နှစ် ဆွမ်း ဆန် စိမ်း လောင်း ပွဲ တွေ မှာ ၊ လမ်း အ လိုက် က မိ မိ တို့လောင်း လှူ တဲ့ လှူ ဘွယ် ၀ တ္ထု တွေ ကို လောင်း ဖို့သံ ဃာ များ ပင့် ဆောင် ရာ မှာ ( ပင့် ဆောင် သူ က မိ မိ ပင့် လာ သော သံ ဃာ နှင့် ပတ် သက် သည့်၊ ဘွဲ့အ မည် ၊သီ တင်း သုံး ရာ ကျောင်း အ မည် စ သည် ဖြင့် အ ချက် အ လက် များ ကို တင် ပြ ရ ခြင်း)
ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒီ့ အ ပြင် ၊ ဖြစ် လာ မည့် ကိစ္စ အ ၀၀ ကို တာ ၀န် ယူ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ အဲ ဒီ လို တောင်း ယူ ထား တဲ့ စာ တွေ ကို လမ်း မ တော် ( မ ယ က ) ရုံး ကို ( ၂၈ ) အောက် တို ဘာ လ နောက် ဆုံး ထား ပေး ပို့ရ မယ် လို့အ မိန့်ထုတ် ပါ တယ် ။
ဆွမ်း လောင်း လို တဲ့ ဒ ကာ တွေ ကို ချည် နှောင် တာ ပါ ပဲ ။ တ ချို့ဒ ကာ ၊ ဒ ကာ မ ၊ တွေ ဟာ ဒီ လုပ် ရပ် ကြောင့် ၊ ကြောက် စိတ် နဲ့၊ တွန့်ဆုတ် ကုန် ကြ ရ ပါ တယ် ။ မိ မိ တို့သာ သ နာ ၊ ဘာ သာ ကို ချိုး နှိမ် နေ တာ ပါ ။ သံ ဃာ တို့ရဲ့လာဘ် လာ ဘ ကို မ ရ အောင် အ နှောက် အ ယှက် ပြု နေ တာ ပါ ပဲ ။
ဒီ အ ဖြစ် က ( န အ ဖ ) လက် ထက် တိုး တက် လာ နေ တဲ့ ဘာ သာ မဲ့ ( စစ် သား ) တွေ ရဲ့မိုက် ရိုင်း မှူ တစ် ခု ပါ ပဲ ။
Posted by အာဇာနည် at 11:20 PM0comments
တက်ချင်သူတွေ လာကြဗျို့ ။ မျိုးချစ်စိတ်ဘဲရှိဖို့ လိူတယ်။
၂ / ၂၀၀၈ ကျောင်းသားတပ်မတော် အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်း
ရင်ကိုထိစေတဲ့ ရေးသားချက်လေးပါ ။ ဝေမျှပါတယ်ခင်ဗျား
Posted by အာဇာနည် at 10:53 PM0comments
Posted by အာဇာနည် at 10:51 PM0comments
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင် လက်အောက်ခံ ဗန္ဓုလသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်က ဂျပန်မှ တင်သွင်း သည့် ရန်ကုန်အတွက် ပါရမီအမည်ရှိ တက္ကစီများ မောင်းနှင်ခွင့်ကို စစ်မှုထမ်းဟောင်းများသာ ရရှိကြောင်း အဆိုပါ ကုမ္ပဏီမှ ၀န်ထမ်းတဦးကပြောသည်။
ဂျပန်မှ မှာယူထားသည့် Toyota Mark II ယာဉ်စီးရေ (၁၀၀)ကို ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလမှ စတင်ပြေး ဆွဲနေ ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကားများ ပြေးဆွဲရန်အတွက် ဗန္ဓုလသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီက ယာဉ်မောင်းများ ခေါ်ယူရန် လျှောက်လွှာပေါင်း (၃) သောင်းကျော် ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အနက် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများကို ဦးစားပေးရွေးကြောင်း၊ စပေါ်ငွေ (၃) သိန်းတင်ရကာ တနေ့ အုံနာကြေး (၁) သောင်းပေးဆောင်ရကြောင်း၊ နံနက် (၆) နာရီမှ ည (၆) နာရီထိဖြစ်ပြီး နေ့လည် (၁၂) နာရီ အ၀င်ပြရကြောင်း၊ ကားကို ကားမောင်းသူ ကိုယ် တိုင် ကွန်ပျူတာ စနစ်သုံး လုံခြုံရေး လက်ဗွေနှိပ်ပြီးမှ ထုတ်ယူခွင့်ရရှိကြောင်း လျှောက်ထားသူ ယာဉ်မောင်းများ က ပြောသည်။
“ဦးပိုင်ဆိုတာက စစ်အစိုးရရဲ့လူတွေနဲ့ ဖွဲ့ ထားတာပဲ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေပဲ ရမှာပေါ့၊ စစ်တပ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအ၀န်းတွေ ကောင်းစားနေချိန်ပဲ၊ သူတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်း ကောင်းစားဖို့ ဒီကားတွေကို စစ်မှုထမ်း ဟောင်းတွေကို ပေးတာပေါ့။ စည်းရုံးထားတာလည်း ပါတယ်” ဟု မ ထ သ ယာဉ်မောင်းတဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တွင် ယခုအခါ ပါရမီတက္ကစီ စီးရေ (၂၃၄) စီး ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ဗန္ဓုလသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး မှတရားဝင် စာ ရင်းများအရ သိရသည်။
ပါရမီတက္ကစီများကို မောင်းချင်သူများကြကြောင်း၊ အကြောင်းမှာ စပေါ်နည်းပြီး ပြင်ဆင်စားရိတ် မရှိ သည့်အတွက် ရသည့်ငွေမှာ အသားတင်ဖြစ်သည့်အပြင် လမ်းတွင် မီးနီဖြတ်မိခြင်း၊ လမ်းကြောမှားခြင်းတို့မှအစ ယာဉ်ထိန်းရဲနှင့် ရှင်းပါက ပါရမီမို့ အဆင်ပြေကြောင်း၊ အပြင်ကားများမှာမူ စပေါ်တင်ပါက (၁၀) သိန်း ၀န်းကျင် ပေးရပြီး ပြင်ဆင်စားရိတ်များလည်း ကိုယ်တိုင်ကြခံကြကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကားမောင်းသူများက ယာဉ်အ သစ်ဖြစ်သည့် ပါရမီယာဉ်များကို ကြိုက်နှစ်ကြကြောင်း တက္ကစီသမားများက ပြောသည်။
ပါရမီယာဉ်မောင်းတဦးက “ကျနော် တနေ့ကို (၂) သောင်းခွဲကတော့ ရတယ်၊ တခါတခါ (၃) သောင်းထိရ ဖူး တယ်၊ အုံနာကြေး (၁) သောင်းဆိုတော့ ပါရမီယာဉ်မောင်းတာ ကိုက်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်ရှိ ထောက်လှမ်းရေးပိုင် တိုက်ခန်းများ လေလံတင်ရောင်းချNEJ/ ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
မင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၉ဦးကို တရားရုံးမထေမဲ့မြင်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၆လစီ အပြစ်ပေး
၈၈ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် ၉ဦးကို တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့ ပုဒ်မနဲ့ တရားလို အရာရှိဖြစ်တဲ့ ဦးမြကြိုင်ကနေ တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး တရားရုံးကို တင်ပြရာမှာ တရားရုံးက ဒီနေ့မှာ ထောင်ဒဏ် ၆ လ အပြစ်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းသားတွေရဲ့ အမှုလိုက်ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက ကြားသိရသမျှကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“မင်းကိုနိုင်ရယ်၊ ကိုကိုကြီးရယ်၊ လှမျိုးနှောင်ရယ်၊ မြအေးရယ်၊ ဥာဏ်လင်း၊ ပြုံးချို၊ အောင်သူ၊ ဌေးကြွယ်၊ မျိုးရန်နိုင်တို့ ကိုးဦးကို အမှုကနေ ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ လျှောက်ထားတယ်။ သူတို့ကို တရားရုံးကို မထိလေးစား ပြုလုပ်တဲ့ ပုဒ်မ အရေးယူပေးဖို့ ဆိုပြီး ဦးမြကြိုင်က တရားရုံးကို လျှောက်ထားတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ အမှုကို တရားရုံးက အမိန့်မချသေးဘူး။ ခဏ ဆိုင်းထားဦးမယ်လို့ ပြောတယ်။ ပုဒ်မ ၂၂၈အရ တရားရုံးကို အနှောက်အယှက်ပေးတယ်။ တရားရုံးကို အမှုစစ်ဆေးရာမှာ ဟန့်တား နှောက်ယှက်မှုတွေ ပြုတဲ့ အရေးယူပေးဖို့ လျှောက်တယ်။ ဒီနေ့ကျတော့ သူတို့ ၉ယောက်ကို ရုံးထုတ်တယ်။ သူတို့ကို ထောင်ဒဏ် ၆ လစီ ပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်။”
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို စွဲဆိုထားတဲ့ ထားတဲ့ ပုဒ်မတွေက အများကြီးရှိသေးပေမယ့် ဒီနေ့ စစ်တဲ့ အမှုထဲမှာတော့ အဲဒီ အမှုတွေ မပါလာပါဘူး။ http://www.voanews.com/burmese/2008-10-29-voa2.cfm
“စစ်အာဏာရှင် ကြီးစိုးမှုမှောင်ရိပ်” အစီရင်ခံစာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျား၊မ ကွဲပြားမှုအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ‘စစ်အဏာရှင် ကြီးစိုးမှုမှောင်ရိပ်’ အမည်ရှိ အစီရင်ခံ စာတစောင် ကို ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချူပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) (WLB) က အောက်တိုဘာ ၂၆ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ WLB (Women’s League of Burma)၏ အစီရင်ခံစာတွင် အမျိုးသမီးနှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နယ်စပ် ဒေသ လူကုန် ကူးမှု တိုးပွားနေမှု၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေး၊ နိုင်ငံ အနှံ့အပြား အမျိုးသမီးများ အပေါ်အကြမ်းဖက်နေမှု စသည့် အဓိကအကြောင်းအရာ ၅ ချက်ကို အခြေခံ ထောက်ပြထားသည်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:54 PM0comments
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:43 PM0comments
"သူတို့ ဒီကနေ စသွားကတည်းက ဘီယာတွေ သောက်သွားကြတာ။ မန့်ဟီးရိုးတဝိုက်က လယ်ကွင်းတွေဘေးမှာ ဆင်းပြီး လယ်ကွင်းထဲ ခေါ်သွားကြတာ။ အဲဒီမှာ ကျော်စွာကစပြီး မုဒိန်းကျင့်တယ်။ ကျန်တဲ့လူတော့ မပါဘူးပေါ့။ ကျင့်ပြီးတာနဲ့ ဘိုဘိုက ဓားနဲ့ စထိုးတယ်။ ဓားဒဏ်ရာ ၅ ချက်နဲ့ ကောင်မလေးက သေဆုံးသွားတာပါ။ ပြီးတော့ အလောင်းကို ရေမြောင်းဘေးမှာ ပစ်ထားလိုက်တယ်" လို့ အမှုဖော်ထုတ်ရာမှာ ကူညီခဲ့သူ မြန်မာတဦးက ပြောပါတယ်။
မူဆယ်ဒေသခံ တယောက်က "သူတို့တွေရဲ့ အသက်တွေကတော့ လူအများ စိတ်ဝင်စားမယ့် ၁၈ နှစ်ကနေ ၂၂ နှစ်ကြား အရွယ်လေးတွေပါ။ လူကုန်ကူးခံရတဲ့ အမျိုးသမီး အများစု ခံရသလိုပါပဲ။ အလုပ်အကိုင် ပေးမယ်ဆိုပြီး လူပွဲစားတွေက ဖျားယောင်းသွေးဆောင် အခေါ်ခံခဲ့ရတာပါ။ လူပွဲစားတွေကတော့ လားရှိုး ရပ်ကွက် ၇ ကပါ။ အခုတော့ ဖမ်းမိသွားပါပြီ။ ကွန်ပြူတာတတ်တော့ တရုတ်ပြည်မှာ ကွန်ပြူတာတတ်၊ အင်္ဂလိပ်စာတတ်ရင် တလ ကျပ် ၁ သိန်းခွဲ ပေးမယ်ဆိုပြီး လိမ်ခေါ်ခဲ့တာပါ" လို့ ပြောပြပါတယ်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 4:33 AM0comments
သန်းရွှေခေတ်မှ ပေါက်ဖွားသော အကြံကုန်စီးပွားရေးပညာသည်များ
by Way Yan
Tuesday, 28 October 2008 20:48
Ruili: Ma Phyu wasafamiliar figure in the Burmese community of Ruili, China, commonly found passing the time by munching betel along the streets. But then one day she was no longer there, and two weeks afterward the truth was found out – Ma Phyu was part ofahuman trafficking operation that specialized in selling young Burmese women as brides to Chinese men.
With the arrest of Ma Phyu, in her thirties, and her accomplices,agrizzly story of the trafficking of over twenty young Burmese women to China as forced sexual partners gradually came to light.
Nabbing the human traffickers, it would transpire, was linked toarape and murder caseaChinese police force cracked. About 18-years old and hailing from Syriam, Burma – the same native town as Ma Phyu – Wah Wah was one of the women that Ma Phyu and her gang had sold into slavery.
Wah Wah was sold toaChinese man living in Sandong, near Beijing, at the price tag of Chinese RMB 20,000 (approximately US$ 2,900). A few weeks later, Wah Wah managed to flee from the clutches of her buyer and made her way back to Ruili earlier this month.
The hapless young lady had nowhere else to go but to return back to her perpetrators, and Ma Phyu was happy when her commodity arrived back in her hands for resale. However, when she tried to sell her to another Chinese man, Wah Wah vehemently refused.
But the traffickers, having already struckadeal and received some advance money, tried to force Wah Wah to accept her newest companion.
As dusk fell over Ruili on that fateful day, Wah Wah was taken by taxi along the road to Namkhan, Burma,afew miles away. Accompanying her in the vehicle were several members of the human trafficker's family.
Eventually, they stopped the taxi next toapaddy field beside the highway in the vicinity of Man Heiro, still in Burmese territory and about 20 miles from Ruili.
"Before leaving Ruili, they were drunk with beer. She was taken toapaddy field near the highway. Then Kyaw Swa started raping her. After that, Bo Bo stabbed her repeatedly. She died from five stab wounds. Then her corpse was left in the nearby drainage," recallsasource from the Chinese police investigation team of the incident.
Local Shan people found her corpse the next day and informed Chinese police by phone. At first, Chinese authorities only investigated the local habitual offenders.
But fortunately, another victim of this human trafficking gang, Shwe Shwe, managed to flee from her Chinese buyer and also return to Ruili. She was given assistance by the local Burmese people living there and provided details vital to tracing down the human trafficking gang, leading to the arrest of 12 people, including Ma Phyu.
Of these culprits, Kyaw Swa and his wife, Bo Bo and Aung Thu Soe are still in the hands of Chinese authorities and are to be dealt with in accordance to Chinese law. The remaining eight traffickers, including Kyaw Tun, Ma Phyu and her 13-year old daughter, were transferred to the hands of the Burma's Muse Human Trafficking Prevention Task Force on the 14th of this month.
Yet the existence of the Muse Human Trafficking Prevention Task Force is itselfasad commentary on the current status of the Burmese state.
The government-supported organization, part ofafive year human trafficking eradication program, is poorly funded, and locals frequently complain of their ineffectiveness and incompetence in preventing human trafficking, the existence of which isawell known fact among local residents. In contrast, people see and hear of the successes of Chinese authorities in preventing the same crime.
Deprived of adequate funds, the Muse Task Force has to collect money from businessmen to feed victims when they arrive back to their homeland. Moreover, to provide clothing, female colleagues are forced to share their uniforms with the victims. And on occasion, victims have to wait for about six months to accumulate the transport fare necessary for them to get back to their hometowns.
Under the pressure of abject poverty in Burma, young Burmese women become easy and vulnerable targets for traffickers, as many future brides for sale are seeking greener pastures and better economic opportunities by leaving their native homes.
Among the many victims of Ma Phyu and her gang were also two Mandalay University students, who were included in the six victims transferred to Burmese authorities by Chinese authorities on the 21st of this month.
"Most victims are in an age group from18 to 22 years old. They were persuaded and cheated by traffickers through the promise ofagood paying job. They cheated educated girls with computer and English language skills by promising them jobs paying 100,000-150,000 kyat per month (approximately US$ 85 to 130)," an eyewitness from Muse said.
The two university students were taken by highway from Lashio to Chinshwehaw and then sold toaChinese citizen hailing from the province of Anhui in northern China at the price of RMB 20,000. They proceeded to change hands from one owner to another likeacommon commodity for about three months.
After three months,abridegroom was sent for each of them; oneamute and blind and the other over 60 years old. They had no choice and could not expect help from any quarters. They had to spendatotal of about six miserable months with these husbands.
Both facedalot of hardships in living with their husbands inaplace that experiences harsh weather and maintainsadifferent social environment withadifferent staple of food – flour instead of rice.
The one who had to sleep with the elderly groom was persecuted every night for not giving her consent to consummate the relationship. The old man burnt her entire back withacigarette and injured her head in two places. Moreover, this old groom defaced her by cutting her hair inabad way.
Yet the removal of Ma Phyu and company from the scene does not spell the end to human trafficking at the Ruili border crossing, let alone to other avenues through which traffickers ply their trade.
Amid the tight pre-Olympic security clampdown, Chinese authorities discovered over 100 Burmese human trafficking victims; among whom were the two university students.
The pre-Olympic security screening also identified and rescued 18 Burmese women from 18 to 30 years of age who were sold to fishermen in Fujian Province. These 18 ladies have also now arrived back on the Burmese border and will shortly be transferred to the Muse Human Trafficking Prevention Task Force.
But, just how long the recent returnees to the border will have to remain there before finding their way home is unfortunately just one of the many questions that remain hanging and unanswered regarding the continued trafficking of Burmese women.
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:59 AM0comments
Wal-Mart pulls eggs from China stores amid chemical scare BEIJING (AFP) - Wal-Mart said Tuesday it had pulledamajor brand of eggs from its stores in China, as concerns rose that an industrial chemical found in Chinese dairy products was in the nation's wider food chain.
In Hong Kong , authorities had already announced they would expand their melamine testing of food imported from China to pork, farmed fish and offal products.
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:47 AM0comments
နို့ မှုန့် ရောင်းချင်ရင်လာလေ..တပြည်လုံးကို သတ်ချင်တာနဲ့အတော်ဘဲ ကျည်ဆန်မကုန်..အဆိပ်စားသေကုန်အောင်
Myanmar top leader meets Chinese PLA vice chief-of-staff
+-21:28, October 27, 2008
Chairman of the Myanmar State Peace and Development Council Senior-General Than Shwe met with visiting Vice Chief-of-Staff of the Chinese People's Liberation Army (PLA) General Zhang Li in the new capital of Nay Pyi Taw Monday.
Than Shwe is also Commander-in-Chief of the Myanmar Defense Services.
Zhang, who leadsamilitary delegation, arrived Yangon Monday morning onagoodwill visit to Myanmar at the invitation of General Thura Shwe Mann, SPDC member and Chief of General Staff ofthe Army, the Navy and the Air Force.
On Monday afternoon, Zhang had discussions with Shwe Mann on furthering the friendly cooperation between the armed forces of the two countries.
Attending the meeting and talks were also Chinese Ambassador Guan Mu and Military Attache Senior-Colonel Fan Lianfeng.
In the evening, General Shwe Mann heldareception at the Defense Ministry in honor of the Chinese PLA delegation.